महानगरको कुर्सीमा सरावगी कि सिंह ? - Tribune Nepal News
महानगरको कुर्सीमा सरावगी कि सिंह ?
May 7, 2022 - 19:17 Updated: May 7, 2022 - 19:17
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा अहिले मुख्यतः निवर्तमान मेयर विजयकुमार सरावगी, राजेशमान सिंहबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सरावगी जनता समाजवादी पार्टी छोडेर नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ । भने, सिंह लोसपा छोडेर जसपाबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
यी दुईको प्रतिस्पर्धामा अर्का उम्मेदवार गिरी गिरीको प्रवेशले कसको पल्ला भारी पार्ला भन्ने तीब्र कौतुहल्ता जाग्न थालेको छ । पत्रकारिता र लेखनमा सक्रिय गिरी मेयरका नयाँ अनुहार हो । उम्मेदवारी मनोनयनको केही दिन अघि मात्रै राप्रपाबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनु भएको हो ।
गिरी आवद्ध राप्रपाको संगठन वीरगञ्जमा कमजोर हुनु र अचानक चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएकाले उहाँको सम्भावना न्यून रहने आँकलन गरिएको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धा भने पुरानै खेलाडी सरावगी र राजेशमानबीच हुने देखिएको हो । २०७४ को चुनावमा सरावगीले जित हात पार्दा राजेशमान मतका आधरमा तेस्रो स्थानमा थिए ।
दुवै उम्मेदवारले यसपटक आ–आफ्नो निश्चित हुने दावी गरिरहेका छन् । आफू मेयर हुँदा थुप्रै विकास निर्माणका काम गरेको र वीरगञ्जलाई व्यवस्थित, सुन्दर र समृद्ध बनाउन अझै काम गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसका लागि आफ्नो अनुभव अब्बल हुने दाबी सरावगीको छ ।
यता मेयर सरावगीले काम गर्न नसकेको भन्दै राजेशमान वीरगञ्जमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पर्यटन विकासलगायतका मुद्दा लिएर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरिरहेका छन् । यी दुवैजनाका आ–आप्mनो दावी रहेपनि जित भने मतदाताको हातमा छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख भएपछि गरेका कामहरुले सरावगीको पनि लोकप्रियता उत्तिकै छ । उनलाई तत्कालिन जसपाले सहयोग नगरेपनि आप्mनो क्षमताले काम गरेर वीरगन्जवासीलाई देखाएकोले उनलाई नै मतदाताले रुचाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । गएको निर्वाचनमा राजपाबाट संतोषजनक भोट ल्याएका राजेशमान सिंह पनि आफैले मत पाउनेमा हौसिएका छन् ।
विगत चुनावको मत परिणामलाई अहिलेको अवस्थासँग जोडेर विश्लेषण गर्दा यसपटकको निर्वाचन थप रोचक बन्ने देखिएको छ । वीरगञ्जमा अहिले एक लाख २४ हजार ६४७ मतदाता छन् । अघिल्लो चुनावमा संघीय समाजवादी फोरमबाट चुनाव लडेका सरावगी १९ हजार ३९३ मत ल्याएर विजयी हुनु भएको थियो । त्यतिबेलाको राजपाबाट चुनाव लडेका राजेशमानले १२ हजार १६५ मत पाउनु भएको थियो ।
जसपाबाट एमाले प्रवेश गर्नुभएका सरावगी र राजपाबाट जसपा हुँदै फेरि लोसपामा परिणत भएको पार्टीबाट एमाले छिरेका राजेशमान एमालेले सरावगीलाई भित्र्याएपछि जसपाबाट चुनावी मैदानमा छन् । दुवैजना दल परिवर्तन गरेका उम्मेदवारहरु भएकोले मतदाताहरु भने कसलाई मत दिँदा वीरगन्जको विकास होला भन्ने विचार मन्थनमा छन् ।
राजेशमानलाई जसपाका प्रदीप यादवको दह्रो समर्थन छ । यादव यसअघि २०७४ को चुनावमा सरवगीको पक्षमा सक्रिय प्रदीपले त्यसबेलाको भोटको अंकगणित अहिले राजेशमानको पक्षमा पार्ने कसरतमा लागेपनि जसपामा क्षमता भएका व्यक्ति हुँदाहुदै बाहिरबाट ल्याएर उम्मेदवार बनाएकोमा भित्री रुपमा असन्तुष्ट छन् । यसो त एमालेमा पनि भर्खरै एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका सरावगीलाई टिकट दिएको भन्दै असन्तुष्टी छ । यो बाहिर भने आएको छैन । त्यसको लागि मतपेटिकामा खसेको मतपरीणाकै प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।
अहिले राजेशमानसित गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसका अजय द्विवेदी अघिल्लो चुनावमा १७ हजार १९७ मत पाएर दोस्रो हुनुभएको थियो । पाँचदलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका राजेशमानको जित सहज होला भन्ने अपेक्षा गरेपनि कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टीलाई मिलाउन नसकेमा परिणाम उल्टो हुनेछ ।
शुरूदेखि नै गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका कांग्रेसले राजेशमानलाई शत प्रतिशत सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून छ । वीरगञ्जमा संगठनको जीत निश्चित हुने आँकलनमा बसेका कांग्रेसी जसपाका राजेशमानलाई मेयरको रुपमा स्वीकार्नुपर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको महशुस गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले लेखेका पोष्टहरुबाट देख्न पाईन्छ ।
गठबन्धनमै रहेका कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति महम्मद सहाबुद्दीन शुरुदेखि नै राजेशमान सिंहको विपक्षी कित्तामा रहेकाले सिंहलाई भोट आउनेमा आशंका छ । गठबन्धनमा रहेको अर्को दल माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारीले त्यसबेला ८ हजार ३०५ मत ल्याएर छैटौं स्थान हुनुहुन्थयो ।
रहबरले पाएको अधिकांश भोट मुस्लिम समुदायको सहानुभूति भोट थियो । त्यो जनमत राजेशमानको पक्षमा जाने सम्भवना निकै कम छ । कारण उहाँसँग पहिले रहेका तत्कालिन राजपाका महानगर अध्यक्ष लियाकत अली समूह अहिले सरावगीको साथमा छन् । माओवादी नगर समितिको विवाद, महानगरमा मेयर र उपमेयर बाहेकमा तालमेल नगर्नुले पनि त्यसको असर चुनावमा देखिने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यस्तै पक्षहरुले पनि यसको लाभ सरावगीलाई जाने बलियो देखिएको छ ।
यता एमालेभित्र पनि सरावगीलाई नरुचाउने समूह नभएको होइन । पार्टी विभाजनका कारण पनि एमालेको शक्ति केही कमजोर भएको विश्लेषण सुनिन्छ । तर, यी दुवै फ्याक्टरको प्रभाव वीरगञ्जमा उतिसारो छैन । २०७४ को चुनावमा ८ हजार ६८८ भोट ल्याएर पाँचौ स्थान बनाएर सरावगीसँगै पराजित नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरुद्धिन अन्सारीको अहिले सरावगीले साथ पाउनुभएको छ ।
एमालेको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राम्रो पकड जमाउन सिपालु बसरुद्दीनको मुस्लिम समुदायको भोट प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ । यसअघि राजेशमानले पाएको मत तत्कालीन राजपाको थियो । अहिले यो दल लोसपा बनेको छ । लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष नै एमालेसँगको गठबन्धनका उपमेयरका उम्मेदवार बनेकाले त्यो भोट समेत राजेशमान सिंहको घट्ने सम्भावना छ ।
लोसपाबाट पुरुषोत्तमलाल झा सरावगीको टीममा उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । भने वीरगञ्जको राजनीतिमा मास्टर माइन्ड मानिएका विमल श्रीवास्तव विजयको साथमा छन् । श्रीवास्तवले गत स्थानीय चुनावमा ८ हजार ७०१ मत ल्याउनु भएको थियो ।
सरावगी आफैं निवर्तमान मेयर हुनु र मतका आधारमा चौथो र पाँचौ स्थानमा रहेका तत्कालीन उम्मेदवार उहाँको साथमा हुनु जितको बलियो आधार मान्न सकिन्छ । राप्रपाबाट महानगरपालिकाको उम्मेदवार गिरीश गिरीले पनि राजेशमान सिंहको भोट काट्ने भएपछि आफू नै अगाडि रहेकोमा ढुक्क हुनुहुन्छ ।
यता सरावगीले साढे ४ वर्षसम्म पदमा रहेर काम गरेको र सबै निर्णय सर्वसम्मतबाट गराएको आधारमा सबैजसो पूर्वजनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीतन्त्रको साथ उनलाई प्राप्त हुने देखिन्छ । यो सरावगीका लागि अर्को सबल पक्ष हो । यी अंकगणित र अनुमानका बीच वीरगञ्ज महानगरको मेयरको कुर्सीमा को बस्ला ? यसको लागि बैशाख ३० गते हुने मतदानपछिको परिणामले नै देखाउने छ ।
वीरगन्ज कारागारमा दुई महिला सहित २४६ जनाद्वारा रक्तदान
जसपाको भोट माग्न जाँदा कांग्रेस कार्यकर्ताको कुटाईबाट गम्भीर घाईते, कवही प्रहरी...
पर्साका ५६ जनाले राप्रपा छोडे
ट्रिब्यून न्युज Feb 18, 2022034
नेकपा माओवादी केन्द्र पर्साको विभिन्न निर्णय, रिक्त पदहरुमा...
ट्रिब्यून न्युज Feb 3, 20220353
ट्रिब्यून न्युज Oct 20, 202104
ट्रिब्यून न्युज Sep 18, 2021011
नेकपा (एस) महानगरको वडा नम्बर ४ मा कमिटि गठन
ट्रिब्यून न्युज Sep 22, 2021045
ट्रिब्यून न्युज Mar 5, 202205
ट्रिब्यून न्युज May 17, 2022065
बाँणिज्य बैंकहरुले यी वस्तुहरु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी)...
ट्रिब्यून न्युज Jan 6, 202203
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीद्वारा भन्सार विभागका...